Apple's Nyowani Yakarukwa Solo Loop Tambo Inogona Kuwana Yakakura Kupfuura Nguva | Ndinobva mac
Uye ndosaka iyo Cupertino firm ichangoburitsa diki diki yemasayizi yeyiyi nyowani modhi yeakarukwa Solo Loop tambo. Izvo zvine musoro kufunga kuti mhando iyi yetambo inogona kupihwa nekufamba kwenguva uye kushandiswa. Apple inoitsanangura mu 'yakanaka kudhinda' uye nenzira iyi kudzoka kunokwanisa kwetambo kunodzivirirwa.
Mirayiridzo mitsva kana mirairo yakagadziriswa yave ichishanda kwenguva asi vashoma vashandisi vakazviziva. Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha ndechekuti dzidziso diki iyi inobatsira vashandisi kusarudza saizi yetambo yavo nyowani nenzira kwayo uye kuti haina kunyanya kusununguka kana kunyanyisa.
Mune tweet Michael Steeber, ratidza shanduko nemifananidzo yeiri mirairo.
Apple yakagadziridza yayo Solo Loop saizi gwara nhasi. Hapana shanduko kune iyo chaiyo manhamba, asi zvakadzama mirairo uye mifananidzo zvakawedzerwa kuti zvikubatsire kukura nenzira kwayo: pic.twitter.com/f4mMXFG0Pp
- Michael Steeber (@MichaelSteeber) September 23, 2020
Inogona kunyatsoonekwa mumufananidzo kuti kuverenga hakuchinje, chii chinoshanduka ndiyo mirairo uye mifananidzo inoratidzwa mazviri. Mune dzimwe nyika kutengwa kwetambo idzi kuchiri kusakwanisika, saka zvinokwanisika kuti Apple ine yakanyanya kudiwa kwavari.
Ini pachangu, mune idzi kesi, ini ndaizomirira kuti ndiedze panyama tambo kuti itenge uye hadzisi dzakachipa tambo. Chero zvazvingaitika, kana tikatevera rairo yakapihwa naApple, hatifanirwe kunge tiine matambudziko navo, asi isu tichaona zvinoitika nekusakara kunokonzerwa nekufamba kwenguva uye nekuita kwekutambanudza pese patinoisa kana bvisa wachi yeApple. Une tambo nyowani mumaoko ako? Tiudze nezve ruzivo rwako mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple's Nyowani Yakarukwa Solo Loop Tambo Inogona Kuwedzera Muhukuru Kupfuura Nguva
Iyo yekupedzisira HUB yeMac yako ndiyo Choetech M20